जनता सँग मेयर रेडियो कार्यक्रमको सम्पादित अंश - Dhading Sanchar
नीलकण्ठ नगरपालिकाको सहयोगमा नीलकण्ठ एफ.एमले उत्पादन गरेको रेडियो कार्यक्रम जनता सँग मेयरको छैटौँ अङकमा नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भिम प्रसाद ढुङ्गानासँग हाम्रा सहकर्मी रामकुमार थापाले समग्र नगरपालिकाको बिकास निर्माण,भावि योजना लगाएतका बिषयमा गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अशं:
१.कार्यव्यस्तताको कारणले धनगढीमा जानुभएको थियो,नगरपालिका संघको कार्यक्रम भनिएको थियो कस्तो भयो बताईदिनुस न ?
हामी तीन दिन अघि डढेलधुरामा आएका थियाँै । डढेलधुरामा सुदुरपश्मिाञ्चलको नगरपालिका संघ प्रदेश नं ७ को प्रदेश अधिवेशन थियो । मंगलबार त्यो अधिवेशन सक्काएर कर्णाली प्रदेशको कार्यक्रममा जानुपर्ने थियो । तर संविधान दिवसमा आउन पर्ने भएको हुनाले १ गते र २ गते कार्यक्रम गरेर नगर प्रमुख जान नभ्याउने भएको हुनाले त्यो कार्यक्रम स¥यो ।
२. प्रदेश नंम्बर ७ मा नगरपालिकाहरुको अवस्था के रहेछ ?
नगरपालिकाको समग्र रुपमा भन्नुपर्दा यहाँ जम्मा ३४ वटा नगरपालिका हो । एउटा उपमहानगरपालिका सहित । अहिले विकास निर्माण भन्दा पनि प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरेको अधिकारहरु कटौती गरिएको अवस्था छ । त्यो अधिकारहरु कटौती भएको हुनाले हाम्रो यसका प्रमुख आतिथ्य प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्रिले नै गर्नुभएको थियो । उहाँले हामीलाई वचन पनि दिनुभएको छ । संविधानमा भएका कुराहरु यहाँभन्दा पहिला जे–जस्तो भए पनि अब हामीले कटौती गर्ने छैन, तपाईहरुले कार्यन्वयन गर्न पाउनुहनेछ भन्नु भएको छ । विशेष गरि विकास निर्माणका कुराहरु त भए तथापि पनि हाम्रो हक अधिकारको विषयमा नगरपालिका संघको सम्बन्ध राम्रो बनाउन सकिन्छ । पार्दर्शीता सबै नगरपालिकामा कसरी ल्याउन सकिन्छ । हामीले गरेका कामहरु हामीले पहिलो पटक स्थानिय स्तरको प्रमुख,उप–प्रमुख भएका छाँै भने भोलि आगामी ईतिहासमा कलङिकत पनि हुन सक्छौ । यस्तो विषयमा हाम्रो धेरै छलफल भएको थियो ।
३.स्थानीय स्वत्त पनि एउटा सरकार हो यहाँको तर अहिले बीचमा देखिएको प्रदेश,संघ र स्थानीय तह बीचको अधिकारमा जुन संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकार खोसेको हो या क्षेत्राधिकार तोड्न खोजेको हो ?
खोसेको भनेर विशेष गरि संविधानको धारामा तोकिएको छैन । तर ती धाराहरुमा दायित्व र विचाहरु मध्ये हामीहरुले प्रयोग गर्न पाईरहेका छैनाँै । हामीलाई धेरै अधिकार दिएको थियो तर अहिले सहकारी र महिला विकास सँग हामीले अधिकार पाईरहेका छैनौँ । सबै प्रदेश सरकारले हडपिरहेको छ । धादिङ निलकण्ठकोे कुरा गर्दा यो ऐन लागु हुने वित्तिकै घरेलु शाखामा निलकण्ठ शाखा भनेर राखिएको थियो । तर अहिले प्रदेश शाखा अन्तर्गत राखिएको छ । अहिले सडक निर्माणको कुराहरु पनि यही निलकण्ठ नगरपालिकामा पनि करिब डेढ करोड रुपँैया जति आएको थियो । अब बीउ–विजन बाँडेर बस्नुपर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र सडक खनेर हिँडेको छ । यसरी दिन प्रतिदिन हाम्रो हक अधिकारहरु कटौती गरेको छ । संघिय सरकारले पनि शिक्षण सिकाई भनेर ३ लाख ६६ हजार रुपँैया मात्रै करिब–करिब २६ जना दरबन्दीमा पठाईएको थियो । तर त्यो अहिले आएर १५ वटा कटौती गरेर निलकण्ठ नगरपालिकाको १५ वटा विद्यालयमा शिक्षकहरु नभएर विधालयको हालत धेरै कमजोर भएको छ । तर हामीलाई स्थानीय सरकारमा वाई पास गरेर दिदैँ ईकाईमा गएको धेरै छन् ।
४. तर यसले त विकास निर्माणमा समस्या बनाउछ होईन ?
अहिले प्रदेश र संघ–संस्थालाई के लाग्छ भने हामी दुई–तिहाई सरकारमा छौँ । हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भएको छ । भोली संस्थागत रुपमा विकास गर्नको तर्फ हाम्रो कार्यकर्ताहरुलाई मात्रै संरक्षण गरे पुग्छ र हामी सबै नेपालि जनताको सरकार हाँै भन्ने महसुस नगरि दिन प्रतिदिन कामहरु हडप्दै गईरहेको छ ।
५.जुन अहिले सुखि नेपालि संवृद्ध नेपाल भन्ने नारा बोकि राखेको छ, यसले त सहयोग गर्दैन जुन प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्दै आएको छ ?
समृद्ध नेपाल भनेर भनिएको छ,प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनिएको छ झार उखेल्ने र पर्खाल लगाउने काम मात्रै गरेको छ ठाउँ–ठाउँमा । त्यसले रोजगारिको व्यवस्था कसरी गरेको छ । त्यस्ता कारणले समृद्ध नेपाल कसरी बन्न सक्छ । यो सरकारले सुखि नेपालि होईन दुखि नेपालि बनाउदँै गएको छ । सरकारको यो शैलीले देश विकासमा जान सक्दैन ।
६.अस्ति जिल्ला समन्वय समिति धादिङमा अख्तियारका आयुक्त आउनु भएको थियो। उहाँका कुराहरु सुन्दा स्थानीय तहमा भएका गतिविधिहरु राम्रो देखिएन नि होईन ?
त्यो दिन म भईन, त्यहाँका कुराहरु मैले राम्रो सँग थाहा पाएको छैन । अहिले स्थानीय तहलाई के छ भने एउटा शक्ति छ । जसले आफुलाई केन्द्रिकृत मानसिकतामा गएको छ सबै हक अधिकार माथि ल्याउनुपर्छ । अर्को अहिले जुन संविधानमा २२ वटा अधिकारहरु आईसकेपछि उहाँहरु आक्र्रोशित हुनुभएको छ । हामीले नै शासन गर्नुपर्छ यो तल तिरको सरकार भन्या केहि पनि होईन भन्ने जुन मानसिकता बोकेकालाई अहिले स्थानीय सरकारमा धेरै अधिकार गयो भनेर त्यो अधिकार फिर्ता गर्नुपर्छ भनिएको छ । अहिले प्रदेश सरकारको पेस्की फछ्र्यौट हेर्ने हो भने हाम्रो स्थानीय सरकारले कुनै प्रदेश सरकारले गर्ने भन्दा राम्रो गरेको छ । त्यसैले हामी स्थानीय सरकारले पनि यसलाई मध्यनजर राखेर हामीले जनताको हितको लागि मध्यनजर गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
७. जनताको सेवा गरेर स्थानीय तहलाई राम्रो बनाउनु भन्ने लक्ष्य राखियो भने त निलकण्ठ नगरपालिकाले जस्ता पार्दर्शीता अपनाउन सकिन्छ नि ?
अब त्यो जनताले सोच्ने कुरा हो । तथापि पनि मेरो क्षमताले भ्याए सम्म मैले गर्न कोसिस गरेको छु । अब त्यो निलकण्ठमा के–के ग¥यो भन्ने कुरा त नगरवासीले बुझ्ने कुरा हो ।
८. धादिङबेसी बजार क्षेत्रको सडक पेटी त बन्न थाल्यो होईन,के त्यस्तो अवरोधहरु भएको होर ?
अहिले सुरुवात् भएको छ । अवरोधहरु पनि भएको छैन । मैले स्पष्ट रुपमा टोल सुधार महासंघलाई जिम्मा दिएको छु । कसैको पनि घर भवन नभत्काई सिरान बजार देखि पुच्छार बजार सम्म बनाउन दिएको छु । अपाङगता मैत्री बनाएर जति खर्च लाग्छ त्यो निलकण्ठ नगरपालिकाले दिने भनि एउटा मुल समिति गठन गरेर दिईसकेका छौँ । त्यस्तो अवरोध छैन केहि–केहिले नदिएमा हामीले उहाँहरुको घर अगाडी बनाउने छैनौँ । त्यसले गर्दा सुरक्षित हुन्छ । हामीले सडक पेटी बनि सकेपछि हामीले हरेक घर–घरमा विरुवा रोप्न दिने योजना बनाएका छाँै ।
९. नगरपालिकाले चाहेर मात्रै होईन नागरिकले पनि साथ दिनुप¥यो ?
नगरपालिकाले मात्रै के गर्ने होर नागरिकले साथ थिए नगरपालिकाले पनि काम गर्ने त हो नि ।
१०.अहिले धादिङ जिल्ला लगाएत नेपाल भरिनै डेंगु रोग सँगै स्क्रबटाईफस फैलिरहेको छ यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य के भईरहेको छ ?
मैले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रमुख व्यक्ति लगाएत सबै टिमलाई जति पैशा लाग्छ नगरपालिकाबाट सहयोग गर्ने छु,त्यसैले प्रत्येक ठाउँमा गएर डेंगुको नियन्त्रणको लागि लाग्न आग्रह गरेको छु । त्यसको लागि हामीले विकास निर्माणको लागि छुट्याएको बजेट रोकेर खर्च गर्न तयार छौँ ।
११.अहिले शाखा बाटोहरु पहिरोले अबरुद्ध भएका छन्,त्यो दशँै अगाडी सफा हुन्छ कि हुदैन ?
हामीले सबै वडाहरुमा त्यसको लागि पैशा पठाई सकेका छौँ । हामीले एउटा मेसिन एक्साभेटर लिएर गएर सबै शाखा सडकहरु सफा गर्ने योजनामा छाँै । त्यो बाटोहरु सबै सफाई भईसकेपछि मात्रै ग्रावेल गर्ने छौ । हाम्रो कारणले बाटो अबरुद्ध हुदैँन अब पानी प¥यो भने केहि गर्न सकिन्न ।
१२.शिक्षाको विषयमा कुरा गर्दा केहि शिक्षक तथा संगठनहरुले पनि विरोध जनाएछन् वास्तविकता के हो ?
शिक्षाको विषयमा के हो भन्दा चार जना,पाँच जना भनेर दरबन्दी राखिएको छ । त्यहाँ विद्यार्थी चार जना,पाँच जना हुन्छ । हामीले यसपालि के ग¥यौ भन्दा हामीले संघ–संगठनका सबै शिक्षकहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर अब १५ जना विधार्थी भएकालाई एउटा दरबन्दी दिने भन्ने निति ल्यायौँ । त्यो निति अनुसार हामीले नगर शिक्षा समितिले निर्णय गर्दा खेरि धेरै ठाउँको दरबन्दीहरु काटीएको होईन विधार्थी संख्या नभएर हटाइएको हो । तर हामीले कुनै पनि ५÷६ जना भएको ठाउँमा ईसिडि कक्षा पनि संचालन गर्ने एक कक्षा सम्म अनुमति पनि दिने त्यसपछि त्यहाँका अविभावकहरुले १५ जना विधार्थी पुग्यो भने फेरि दरबन्दी फिर्ता ल्याउने निति निर्णय गरेका थियौ । भैरवी माध्यामिक विद्यालयमा विधार्थी संख्यामा कमि भएको हुनाले एक जना शिक्षकलाई पठाईएको थियो । तर उहाँ अझै पनि जानु भएको छैन ।
१३.जस्तो नगरपालिकाले गरेको निर्णयमा नगरपालिकाले सहयोग गरेन ?
अब सबैले गरेनन् भन्ने कुरा पनि छैन । एकात्मक अपवादको रुपमा त आईरहेको छ ।
१४.के विधार्थी पठाउने शिक्षकले राजनितिक गरेर हो,यस्तो समस्या भएको ?
हामी आफ्नो दायित्व के हो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्ने हुन्छ । तथापी मेरो भनाई के हो भन्दा तपाईहरुले विधार्थी माथि खेलवाड नगरि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुस् ।
१५.मासिक कार्ययोजना नगरपालिका शिक्षा शाखामा पेश गर्ने स्कुललाई मासिक रुपमा स्कुलको तलब खुवाउने भन्ने कुरा थियो त्यो पनि गर्न सकिएन ?
चार/चार महिनामा एक पटक तलव खाने थियो पहिला,मैले पछि एक/एक महिनामा दिने भनेको थिए । तर महिना/महिनामा प्रतिवेदन नआएपछि कसरी तलब दिने त । हरेक विधालयहरुको प्रधानाध्यापकहरुको मिटिङ राख्ने गर्दछौ । हामीले हरेक कार्यक्रमहरु राम्रो होस् भनेर लागेका छाँै ।
१६.जस्तो चक्रपथ निर्माणको कार्य के भईरहेको छ ?
चक्रपथको कामहरु गिट्टि राखि सकिएको छ,जुन पानीले अलि समस्या पार्ने हो । हामीले यो आर्थिक वर्ष भित्रमा काम सम्पन्न गर्ने योजनामा छौँ ।
१७.जस्तो भ्यु–टावरको कुरा गर्दा कत्तिको भयो ?
त्यो त करिब/करिब सकिसकेको छ । पानीको कारणले गर्दा काममा समस्या आएको छ ।
१८.जस्तो तपाईले नगरपालिकाको मेयर र उप–मेयर मिलेर हामी अगाडी बढ्छौ भनेर अन्तवार्ता दिनु भएको रहेछ के त्यस्तो समस्या भएको हो र ?
हामी मिलिरहेका छाँै,हामीले सबै विकास निर्माणका काममा मिलेर लागि रहेका छाँै । अहिले सम्म उपमेयर बाट समस्या भयो भनेर अहिले सम्म भनिएको छैन । यदि हामी पनि मिलेनौँ भने नागरिहरुमाथि समस्या आउन सक्छ त्यसैले त्यस्तो हुदैन ।
१९.धादिङबेसी देखि सुनौला बजार सम्मको बाटो बिग्रएको छ,यसमा नगरपालिकाको के भुमिका रहन्छ ?
यदि सडक उप्किएको छ भने तपाईहरुले सामाजिक संजालमा राख्न सक्नुहुने छ । त्यस पछि म आफै आएर हेर्ने छु ।
२०.धादिङबेसीको खानेपानी लाईन वितरण भनिएको छ,त्यो कहिले होला ?
खानेपानी त्यहाँको लागि मात्रै होईन सबै क्षेत्रमा पु¥र्याउने भनेका छौँ । त्यसको लागि हामीले १ करोड भन्दा बढि बजेट छुट्याएका छौँ ।
२१.अन्त्यमा छु रेडियो सुनेर बस्नुहुने नागरिकहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
हामीले दुई वर्ष कटाई सकेका छाँै । अनुभुती सोचे अनुसारको निकाल्न सक्या छैन । तथापी यो वर्ष भौतिक विकासमा हामी अगाडी बढेका छौँ । तपाईहरुको गुनासो समस्याहरु छन् भने मलाई सम्पर्क गरेर गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईहरुको शिर निहुरिने काम हामीले गर्ने छैनौ । विकास निर्माणको काम मेयर–उपमेयरको मात्रै होईन सबै नागरिकहरुको पनि हो । त्यसैले तपाईहरु पनि विकास निर्माणको काममा हामीलाई साथ र सहयोग गरेर अगाडी बढ्न अनुरोध गर्दछु । निलकण्ठ एफ.एम परिवारलाई धेरै–धेरै धन्यवाद मेरो कुरा र जनताको गुनासोहरु सुन्ने र सुनाउने मौका दिनु भयो ।साथै सम्पुर्ण नगरवासीहरुले आफ्नो गुनासोहरु मलाई फोन गरेर राख्न सक्नुहुनेछ धन्यबाद ।
अर्को अंक असोज २८ गते आउदै छ । सिधा सम्पर्कको लागि ०१०–५२१४३०